Puzzle lalao an-tserasera
Logic dia manampy antsika hanao ny tsara fanapahan-kevitra, ary maimaim-poana amin'ny aterineto lalao lojika – Play fa efa misy voly sy hampitombo ny fahaiza-manao. Afa-tsy ny fanampiana ny lojika dia mandany fianakaviana ny ondry tao an-trano, manampy ny letaha Bob fotoana mba ho any amin'ny akorany dadabeny, hiaro reliably ny lapa, no hanesorana ny rakitra any anaty lava-bato amin'ny Twinkle sy kely, ary maro premnozhestvo ny fandreseny amin'ny TIC-tac-rantsan-tongony, sarintany, ranomasina ady sy ny echec . Lojika – dia ny fahafahana sy drafitra mialoha. Dia nomena ny olona liana, ary io toetra io azo mandrakariva kokoa amin'ny asa Subscribe to vaovao.
Lalao Puzzle lalao tamin'ny Category:
Farany Puzzle lalao an-tserasera
Lalao Online Puzzle lalao an-tserasera
Logic Games-tserasera ho an'ny fotoana rehetra
Na dia mpilalao tia lalao mavitrika amin'ny ady sy ny niainany, tia milalao maimaim-poana amin'ny aterineto lojika. Na dia tsy hanatrika ity sokajy manokana ny tena pastimes foana ny lojika ny singa olana. Tsy misy Walker dia tsy tsy misy rafitra mba hanangona asa, na mihazakazaka mba hanasongadinana ny Misafotofoto nanaovana. Tsy misy lojika dia tsy afaka handresy ny fahavalo, fa tsy mba hahita vady mety tifitra teboka. Na dia miaro ny lapa, ny tafika tsy maintsy apetraka ao anatin'ny paritra ka ny fahavalo amin'ny faritra misy afo avy eo ambany.
-tserasera lalao piozila unobtrusively mampianatra hentitra loatra fisainana. Amin'izy ireo dia ho hainao ny hisafidy ny tsara paikady manaraka, dia niandry ny vokatra. Ary hanao lalao mahaliana ny siansa dia aseho amin'ny lohahevitra isan-karazany.
Classical: checkers sy echec, mahjong, andalana, Sudoku, TIC-tac-rantsan-tongony, ranomasina ady
Pipeline sy ny rafitra fanangonana, simia
Puzzles sy ny tenifototra
Passage ny Misafotofoto
ny lalao ny
manomboka entana: Catapult, ricochet, mihetsiketsika rafitra
Search: mandà Output
Fantatsika fa ho hankafy
Izany no andry izay mihevitra ny Cozy, ankizivavy sy ny ankizilahy. Samy mitaky ny tiany dia ho afa-po, satria afaka hilalao lalao maimaim-poana piozila mpandinika beginners sy gurus ny misaina saina.
Ny tanora dia afaka manorina lalamby fiaran-dalamby sy hitarika eo amin'ny lamba raha manalavitra fifandonana; tanety ny fiaramanidina tao amin'ny seranam-piaramanidina; manova ny toe-mianjera eo meteorites sambon-danitra. Na mankanesa any prehistoric fotoana, rehefa nitondra dinosaurs ka vonjeo ny fametrahan ny atody noho ny fandringanana ny farany sitry. Mianatra koa izy ireo izay mametraka lalàna ara-batana zavatra maro sy nanome fahalalana vaovao, kajy ny hafainganam-pandeha sy ny tari-dalana ny zavatra izay efa nahatratra ny tanjona.
Puzzle lalao ho an'ny tovovavy hanao ny dingana ny fanodinana na mijinja manampy. Alohan'ny miezaka amin'ny akanjo, tsy maintsy ho hita aloha tao amin'ny efitrano, izay be dia be ny zavatra tsy misy azy. Mandritra izany fotoana izany, ary ny mba miaraka amin, fampielezana ny zavatra teo amin'ny talantalana, mpantsaka, akanjo sy ny sisim-pandrian hangers latabatra.
Very tanora mpilalao dia nahita zavatra hiverenany ho any amin'ny seza. Araka ny hita tao amin'ny efitrano nijery toy ny kilalao manome fitoerana, mandefa izany indray amin'ny mitaritarika ny totozy. Lesona fandinihana ianao, ary raha haingana ka hihaona amin'ny fotoana, dia hitondra tombontsoa fanampiny.
Heroes lojika lalao miandry anao
Tsy Faly mahafantatra amin'ny sarimiaina endri-tsoratra, andiam-boky tantara an-tsary, manga sy ny sarimiaina, na mahita ny vaovao endri-tsoratra izay manonofy hitsena anao.
Fixico mampiseho ny tranony, ary mampianatra fanamboarana teknika, mampifandray ny antsipirihany. Ao ny letaha Bob ny be dia be ny tsy vita raharaha ary dia faly raha manolotra ny fanampiana. Indraindray dia sahiran-tsaina vokany sy tsy mahalala ny fomba hahitana ny lalana tsara. Ao amin'ny Aiza ny ny Rano? Ny olana amin'ny fantsona - izy ireo clog ka corrode, ary tiany ny milomano. Ampio izy mba hanamboarana ny olana rehetra amin'ny alalan'ny filalaovana lalao an-tserasera piozila maimaim-poana.
indray ny ondry aman'osy sy very ho azy ireo sakana maro! Ny toro-hevitra dia hanampy afaka ny hatezerany izy ireo mba ho afaka amin'ny fahoriana sy hahita ny lalana an-trano. Ho voly amin'ny The Simpsons, Smeshariki, Fanalana Bob, ny vahiny Pou, Peppa kisoa, orsa sy ny maro hafa mpiara-monina.
Ny olon-drehetra dia tokony ho amin'ny fomba hanampiana azy ireo, dia nodimandry any piozila, tsarovy ny toerana misy ny sary na izy rehetra mitambatra, mba hiala amin'ny marina ny labyrinth sy ny teknika. Be dia be ny asa, na dia ... Dia ny lalao, asa io? Koa hiala voly mandritra ny andro, maraina sy hariva, amin'ny andavanandro sy amin'ny faran'ny herinandro, amin'ny andro fety sy rehefa nanao ny lesona na oviana na oviana ny taona. Rehefa dinihina tokoa, mba ho marani-tsaina, ka mangatsiatsiaka, ary izany dia mora ny ho amintsika!